Fahasamihafana eo amin'ny synthesis sy ny Retrosynthesis | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny synthesis sy ny Retrosynthesis | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Siansa & natiora / Siansa / Simia / Simia biolojika / Fahasamihafana eo amin'ny syntheta sy ny Retrosynthesis
Fahasamihafana eo amin'ny synthesis sy ny Retrosynthesis
3 Desambra 2019 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny synthesis sy ny retrosynthesis dia ny synthesie dia ny fananganana fitambarana organika , fa ny retrosynthesis kosa dia ny teknika famahana olana momba ny synthetic organika.
Na dia mitovy aza ny hoe synthesis sy retrosynthesis, dia teny roa samy hafa izay maneho dikany roa samy hafa. Na izany aza, misy fifandraisana eo amin'izy ireo ihany koa; retrosynthesis dia manazava tsotra izao momba ny syntetika. Amin'ity lahatsoratra ity dia mampiasa ny teny hoe synthesis izahay hanazavana ny sampana manokana momba ny syntetika simika izay misy ny synthetic organika. Ny famokarana zana-kazo iray dia mety misy lalana samihafa amin'ny syntetika ary azontsika atao ny mamaritra ny làlana mety amin'ny fampitahana ireo làlana rehetra mampiasa retrosynthesis.
2. Inona no atao hoe Syntèse
3. Inona no atao hoe Retrosynthesis
4. Fampitahana mifanila - Synthesis vs Retrosynthesis amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Synthesis?
Ny syntèse dia fananganana fitambarana organika. Sampana manokana momba ny syntetika simika izay manondro ny synthetic organika. Amin'ny ankapobeny, ny fitambarana biolojika dia be pitsiny noho ny fitambarana tsy mihombo. Noho izany dia sarotra koa ny fizotran'ny syntetika an'ireo fitambarana organika ireo. Ny faritra vitsivitsy amin'ny syntetika biolojika dia misy ny synthesie total, semisynthesis, metodolojia, synthesie stereoselective sns.
Sary 01: Làlan-kizorana tsy mitovy amin'ny famolavolana ny vokatra mitovy
Ny teny hoe syntetika total dia manondro ny syntetika feno amin'ny fangaro organika. Eto, ny fitaovana fanombohana dia mpialoha lalana tsotra sy voajanahary na petrochemical compound. Misy fomba roa azontsika ampiasaina hividianana synthes tanteraka: fomba fiasa synthesika mivantana sy fomba fiasa syntetika mifamatotra. Amin'ny fomba fiasa syntetika dia afaka mampiasa andian-dahatsoratra misy tohiny isika tsirairay, mba handefasana ny fitambarana simika tiana. Ny fomba fiasa synthesie Convergent dia misy ny famokarana sombin-javatra samihafa sy ny fitambarana amin'ny farany hahazoana ny vokatra tadiavina.
Inona ny atao hoe Retrosynthesis?
Retrosynthesis dia teknika hamahana olana momba ny syntetika organika. Noho izany, famakafakana izany. Amin'ity teknika ity dia manova molekiola kendrena ho molekiola tsotra mialoha isika, tsy misy fiheverana ny fihetsika na ny reagents ampiasaina mandritra io fanovana io. Aorian'izay dia mila mandinika ny molekiola tsirairay mialoha isika amin'ny alàlan'ny fomba mitovy. Tsy maintsy ataontsika izany mandra-pahatongantsika ao amin'ny molekiola prekôlôgy tsotra tsotra. Matetika, ny fizotran'ny synthesis dia manana làlana mihoatra ny iray amin'ny famokarana ilay vokatra tadiavina. Amin'izay, ny retrosynthesis dia tena ilaina amin'ny famaritana ireo làlana samihafa ireo ary mampitaha azy ireo hamaritana ny làlana mety indrindra sy mahomby indrindra.
Sary 02: Fampiharana Synthon
Amin'ity teknika ity dia misy teny samihafa; mila mahafantatra ny famaritana azy isika. Retron dia manondro ny fitambarana simika tsotra indrindra izay mamela ny fanovana voalaza etsy ambony. Ny hazo retrosynthetic dia sary mampiseho ny mety ho làlan'ny synthesie rehetra. Synthon dia fitambarana izay afaka manampy ny fanovana, raha ny tanjona kendrena no vokatra farany irina.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny synthesis sy ny Retrosynthesis?
Na dia mitovy aza ny hoe synthesis sy retrosynthesis, dia teny roa samy hafa izay maneho dikany roa samy hafa. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny synthesis sy ny retrosynthesis dia ny synthesie dia ny fananganana compound organik. Saingy, ny retrosynthesis dia ny teknika famahana olana momba ny synthetic organika. Noho izany, ny teny hoe syntheta dia manondro ny famokarana ny vokatra tadiavina, fa ny teny hoe retrosynthesis dia manondro ny famakafakana ny fizotry ny famokarana. Mety misy làlana samihafa azo atao amin'ny famokarana fitambarana mitovy. Eto isika dia afaka mampiasa retrosynthesis ho famaritana ny làlana mety indrindra sy mahomby indrindra.
Ity ambany ity ny infographic dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny synthesis sy ny retrosynthesis.
Famintinana - Synthesis vs Retrosynthesis
Na dia mitovy aza ny hoe synthesis sy retrosynthesis, dia teny roa samy hafa izay maneho dikany roa samy hafa. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny synthesis sy ny retrosynthesis dia ny synthesie dia ny fananganana compound biolojika ary ny retrosynthesis dia ny teknika famahana olana momba ny synthesis organika. Any, ny synthesis dia midika hoe ny fizotry ny famokarana raha ny retrosynthesis kosa dia ny fandalinana ny fizotry ny famokarana. Midika izany; ny famokarana zana-kazo iray dia mety misy zotra synthesie samy hafa ary azontsika atao ny mamaritra ny làlana mety amin'ny fampitahana ireo làlana rehetra mampiasa retrosynthesis.
1. "9.9 Fampidirana ny sintetika biolojika." Chemistry LibreTexts, tranomboky, 5 Jona 2019, Azo zahana eto .
2. "Synthesis Organic." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 8 Novambra 2019, Hita eto .
3. "Fanadihadiana momba ny famerenana amin'ny laoniny." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 14 Jolay 2019, Azo jerena eto .
1. "synthete BHC an'ny ibuprofen 2" Nataoko, novaiko izy - Wikimedia Commons: Rakitra: BHC synthesis of ibuprofen.png, (CC0) via Commons Wikimedia
2. "Fanadihadiana amin'ny fomba hafa momba ny asidra phenylacetic" (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Phenol sy Phenyl Fahasamihafana eo amin'ny Base sy Nucleophile Fahasamihafana eo amin'ny Polycarbonate sy ABS Fahasamihafana eo amin'ny BPA sy BPS Fahasamihafana eo amin'ny asidra acetic sy asidra Ethanoic
Fahasamihafana eo amin'ny fifindra-monina sy ny fifindra-monina
Fahasamihafana eo amin'ny Algorithm sy Pseudocode
Fahasamihafana eo amin'ny IGBT sy ny thyristor
Fahasamihafana eo amin'ny fiantraikan'ny mpanorina sy ny fihodinan'ny genetika
Fahasamihafana eo amin'ny Macro sy ny Inline Function